I Werela Myers-Briggs? ENTP? | Martech Zone
Anyị niile kpọrọ asị ịtụba n'ime bọket, mana mụ na onye nọ na Myers-Briggs malitere mkparịta ụka dị ukwuu. Nsonaazụ ahụ enweghị iche na afọ iri gara aga, m bụ ENTP. Lee ihe wepụta:
Ndị ENTP na-eji ikike ha nwere iji echiche efu na ihe ọhụrụ eme ihe iji lebara nsogbu anya. Tụkwasị obi na nka ha ime ka ha pụọ ​​na nsogbu, ha na-elegharakarị ịkwadebe zuru oke maka ọnọdụ ọ bụla anya. Njirimara a, yana ọchịchọ ha ịlele oge achọrọ iji wuchaa ọrụ, nwere ike ime ka ENTP gbasaa, na-arụ ọrụ ugboro ugboro karịa oge a tụrụ anya ya. Ihe na-eme ka ọnọdụ a ka njọ bụ n ’ọnọdụ ha n’onwe ha ịnwale ihe ngwọta ọhụrụ. Nke a na-eme ha ka ọ dị ha mfe ịkwaga n’ihe ịma aka ọzọ mgbe ihe na-agwụ ike. ENTPs na-enwe nkụda mmụọ mgbe ikike ha na-ezighi ezi adịghị arụ ọrụ ma ha ga-ezere ọnọdụ ndị ha nwere ike ịda.
Ọ bụrụ na nrụgide na-aga n'ihu, a ga-adọpụ uche ENTPs ma ha nwere ike ime "omume" ha. Mmetụta nke arụghị ọrụ, adịghị ike, na erughị eru na-achịkwa. Ọ dị ha mkpa ịgbanahụ ọnọdụ ndị metụtara nchekasị pụtara ìhè maka ENTP karịa ụdị àgwà ọ bụla ọzọ. N'inwe obi abụọ ma ha ga-enwe ihe ọ ga-ewe iji rụzuo otu ọrụ, ha na-eme ka ụjọ ha tụkwasị n'ọnọdụ ndị ha na-agaghị amata. Icjọ, ụjọ, na nchegbu wee gbochie ngosipụta nke ihe okike ha. Mmeghachi omume phobic na-agbachitere na-eme ka ENTP gbochie mmezu na mpaghara ndị ọzọ ma gbochie ihe ịga nke ọma ha na-eme.
Ọ dị ịtụnanya (na nkụda mmụọ) etu nkọwa a si emetụta m. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịle anya n'àgwà gị, enwere ọtụtụ ihe ntanetị. Myers Briggs nwere ike inyere gị aka na mmekọrịta gị na ndị ọrụ ndị ọzọ na ndị ahịa, yana ịnye nghọta n'ime ebe ịchọrọ itinye uche na ihe ịga nke ọma.
Tags: nwa ehindechijim irsayuto mkpanakawindowsekwentị windo
Mee 5, 2008 na 9: 22 AM
Abụ m ENTJ. Ekwenyere m kpamkpam - nsonaazụ ndị a na-akwụwa aka ọtọ.
Mee 5, 2008 na 12: 29 PM
Doug, ị bụkwa Taurus, yabụ na ị bụ onye kwụsiri ike, na-agbanwe agbanwe, onye hụrụ ụlọ n'anya nke ga-abụ ezigbo enyi ma ọ bụ onye ọlụlụ mgbe niile. Anụkwara m na ị nwere mmasị ije dị ogologo n'ụsọ osimiri mgbe anyanwụ dara.
Ndị mmadụ na-achọkarị ịmata akụkụ nke ule mmadụ nwere ike ikwenye ịnabata. Ọbụna na saịtị Myers-Briggs, ha kwuru na nsonaazụ ya bụ ihe efu 15-47% nke oge ahụ. Enwere m obi abụọ na ule ndị a. Enwere m ụma lere ule ndị a anya n'ụzọ ezighi ezi, ma ka na ndị ọrụ ibe m na ndị were m n'ọrụ chere na nsonaazụ ahụ gosipụtara ụdị mmadụ m bụ, (ma nwaa ime ha.)
Zaa "Ee" nye ajụjụ niile dị n'ịntanetị Myers-Briggs nyocha, wee hụ ma ị ka ga-amata nsonaazụ ya. (Na-eleghara akwụkwọ ozi na azịza ị na-enweta anya.)
Mee 5, 2008 na 1: 22 PM
Abụ m onye Aries… isi ike na-echeta ?!
Sep 17, 2008 na 10:56 PM
Maazị Douglass, ọ ga-amasị m ịnwa gị aka ka ị tụlee iwere Myers Briggs na gburugburu ebe obibi kwesịrị ekwesị. http://www.type-resources.com/ExploringYou/protostart.html
See hụrụ, mgbe a na-elekọta ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, I ga-ekpebi dabere na nchọta nke ihe mmasị niile pụtara, ihe ebum n'uche gị bụ. Ọ bụ ihe na-adịghị mma, dịka Myers Briggs ezubere, iji Nyochaa wee kọwaa ya site n'ụdị kọọrọ gị. Mgbe ị na-eme omume ọma, choosehọrọ (ịhọrọ onwe gị), mgbe ahụ ị ga-eji ya tụnyere ụdị a kọọrọ, mgbe ahụ, I ga-enyocha ha abụọ iji chọpụta ụdị kacha mma gị. MGBE… na naanị mgbe ahụ, ka Myers Briggs zuru ezu iji ya 'kachasị nwee ike: na-enyere gị aka ịghọtakwu banyere gị, iji ghọta ndị mmadụ nke ọma. lelee http://www.type-resources.com/ExploringYou/protostart.html ụdị ntanetị nke usoro ịkọwapụta onwe gị site na Myers Briggs Type Indicator. Ọ bụ ezigbo ụgwọ ọrụ, mgbe enyere ya ọfụma. Cheers ka a njem wholeness…
Mee 6, 2008 na 3: 39 PM
Heh, ihe nzuzu, abum onye ENTP kwa (INline borderline). Nkọwa ndị ahụ bụ ntụpọ, ọbụlagodi maka m.
Mee 11, 2008 na 5: 05 PM
Abụ m onye ESTJ ebe a!
Mee 11, 2008 na 8: 18 PM
Abụ m onye INFP.
N'agbanyeghị ugboro ole m na-eme ule ndị a (ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ule ndị a m na-eme) ọ na-apụta otu. Ya mere, echere m na m rapaara na ya (ọ dabara kwa too)
Ma abụ m onye Aries 🙂
Aug 23, 2008 na 2: 33 AM
Nke ahụ amaka. Abụ m ENTP + Aries kwa. Achọpụtara m nkọwa maka abụọ nwere myirịta ma bụrụ eziokwu maka m
Dec 28, 2012 na 2:21 PM
Nwa nwanyi m ENTP, na-achọ ibido nna ukwu na Marketing & creativity na London. Enwebeghị m ike itinye onwe m n'ihe gbasara ọrụ ọrụ. Ọ bụla nke uche gị ndụmọdụ m Mr Karr? 🙂
Dec 28, 2012 na 2:29 PM
@yasminebennis: ihe dị ka afọ iri gara aga, amalitere m ịde blọgụ ma ọ gbanwere ndụ m. Ugbu a, blọọgụ ahụ bụ ihe dị n'etiti nke m Agency (DK New Media). Ya niile malitere site na-ekere òkè m chọpụtara na ahụmahụ online na onye ọ bụla… M ji nwayọọ nwayọọ wuru ikike na aha na ohere na-na-na-akwanyere ùgwù. M na-agbalịrị ịdị na-enwe mmetụta dị mma ma na-ekere òkè n'àgwà m (ọ bụ ezie na mụ na Chineke na ndọrọ ndọrọ ọchịchị) :) Echere m na ịmalite blọgụ nke gị ma ọ bụ ịrịọ ka ị bụrụ onye edemede na-enye onyinye na otu mmasị gị ga-abụ ụzọ dị mma isi bido.
Dec 28, 2012 na 2:38 PM
Nke a dị ịtụnanya! Naanị m kpebiri ịmepụta blog 4 ụbọchị gara aga! Site na ya, m ga-atụle akụkụ nke okike na Arts, Azụmaahịa na ndụ kwa ụbọchị. M ga-ahụ n'anya n'echiche gị mgbe ọ dị njikere! Daalụ maka nzaghachi gị ozugbo !!
Dec 30, 2012 na 9:08 PM